Tongan’ireo mpianatra tao Hong Kong tany an-tsekoly ny fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy
Fantatry ny mpianatra ao HK fa tsy nomena ny fahalalahana.
Voadika ny 13 Septambra 2019 5:21 GMT
Sarivongan'ny Demokrasia ao amin'ny Oniversite Shinoa any Hong Kong. Sary avy amin'ny haino aman-jeri-panjakana ao Hong Kong, RTHK.
Nifarana tamin'ny 2 Septambra ny fialantsasatry ny fahavaratra ary efa niverina any an-tsekoly sy oniversite avokoa ireo mpianatra tao Hong Kong. Maro ny mpanohana ny fitondrana no nanantena fa hanamarika ny fahafatesana tsimoramora ny fihetsiketsehana manelingelina tsikelikely nitranga tao amin'ny tanàndehibe izany.
Mety tsy nampoizin'izy ireo anefa ny fahavononan'ireo taranaka tanora tao Hong Kong satria dia mpianatra an'arivony avy amin'ny lisea sy ny Oniversite no namerina ny fihetsiketsehana an-dalambe tany amin'ny faritry ny anjerimanontolo .
Sarivongan'ny demaokrasia tao amin'ny “Oniversiten'ny Mpirotaka”
Tamin'ny 31 Aogositra, natsangana tao amin'ny Oniversite Shinoa tao Hong Kong ny “sarivongan'ny demaokrasia”. Mampiseho mpanao fihetsiketsehana eo amin'ny lohalaharana vonona miaraka amin'ny fiarovan-doha, satroka, solomaso fiarovana ary saron-tava fiarovana amin'ny etona, mitazona elo amin'ny tanany ankavanana sy saina miaraka amin'ny teny faneva, “Avereno Hong Kong. Revolisiona amin'ny Vanim-potoana Iainantsika ” ity sarivongana ity, izay asa-tànana notohanan'ny fitia tsy mba hetra an-tserasera,.
Tany am-piandohan'ny volana Jona, nopetahana anarana (amin'ny teny Shinoa) hoe “Oniversiten'ny Mpirotaka” ao amin'ny sarintany Google ny Oniversite Shinoa ao Hong Kong ho mariky ny hetsika fanentanana manohitra ny fandraisana anjaran'ny mpianatra ao amin'ny oniversite amin'ny fihetsiketsehana manohitra ny fampodiana. Saingy samy faly nandray ny marika tamim-pireharehana ireo mpianatra sy ireo maintimolaly tao amin'ny CUHK .
Lasa fanamiana iraisana ny T-shirt mainty sy ny fitaovam-pihetsiketsehana manokana nandritra ny fitarihan-dàlana nataon'ny sendikan'ny mpianatry ny oniversite tamin'ny mpianatra vaovao:
Toy izao ny endriky ny fitarihan-dàlana natao tamin'ireo mpianatra vaovao tamin'ity taona ity.
Ny anjerimanontolo no toeram-pivoriana nanaovana ankivy ny fampianaran'ny oniversite amin'ny andro voalohany fanombohan'ny taom-pianarana vaovao:
Sora-baventy tena lava mahavariana tamin'ny fivoriana nanaovana ankivy ny fampianarana androany tao amin'ny Oniversite Shinoa ao Hong Kong (CUHK) tamin'ny andro voalohany nanombohan'ny fotoam-pianarana vaovao. Saripikan'ny MP Weekly.
Tohivakan'olombelona tany amin'ny lisea
Mpianatra avy amin'ny lisea miisa 180 teo ho eo no nanatevin-daharana ihany koa ny hetsika fanaovana ankivy ny fampianarana. Satria tohanan'ny biraom-panabeazam-panjakana ny ankamaroan'ny lisea dia tsy maintsy niatrika famoretana bebe kokoa ireo mpianatra eny amin'ny lisea rehefa nandray anjara tamin'ny hetsika izy ireo. Nanome toromarika ny biraom-panabeazana talohan'ny nanombohan'ny taom-pianarana nitaky ireo tompon'andraikitry ny sekoly tsy hanao ankivy ny fampianarana, tsy hiresaka politika ao an-dakilasy, ary hitatitra momba ny fihetsiketsehana any amin'ny birao. Tsy nampihemotra ireo mpianatra anefa izany.
Tamin'ny andro voalohany an-tsekoly, mpianatra avy amin'ny sekoly ambony an'arivony no nivory tao afovoan-tanàna mba hanatrika ny fivoriambe hanaovana ankivy ny lakilasy:
Ny mpianatra tao HK teo am-panaovana fihetsiketsehana tao afovoan-tanàna, nanao fanamian'ny sekoly fotsy na akanjo fanamiana mainty ny olona marobe sady nihiaka nihira ny teny filamatry ny hetsika.
Tamin'ny andro faharoa dia niverina an-tsekoly izy ireo ary nanao tohivakan'olombelona sy namerina ​​namaky ny fitakiana lehibe dimy tamin'ny hetsika manohitra ny fampodiana, ao anatin'izany ny fanesorana tanteraka ny volavolan-dalàna, ny fanadihadiana mahaleotena momba ny tranga, ny fanavaozana politika demaokratika, sns…:
— Jennifer HY Chan ??⛱ (@Jennifer_hk2019) September 3, 2019
Ny ankizy no hoavintsika.
Nahoana ireo mpianatra ao HK ireo no manao fihetsiketsehana any am-pianarana? Satria fantatr'izy ireo tsara izany rehetra izany: Sarobidy ny Fahalalahana! Tsy tokony hitsakitsahana ny demaokrasia!
Tena niavaka ary mampihetsi-po ny sasany tamin'ireo fihetsiketsehana. Tao amin'ny sekoly iray, nihira ny mpianatra hoe “Renareo ve ny vahoaka mihira?” rehefa nihira ny hiram-pirenena Shinoa ny tompon'andraikitry ny sekoly nandritra ny lanonana fanokafana:
Ireo mpianatra avy amin'ny lisea nihira hoe «Renareo ve ny Vahoaka Mihira» fa tsy ny hiram-pirenena Shinoa nandritra ny lanonana fanokafana ny taom-pampianaran'ny sekoly. Nangina izy ireo rehefa nalefa ny hiram-pianarana ary nihorakoraka ny teny filamatra avy eo.
Sekoly vitsivitsy ihany no namela ireo mpianatra hanao hetsika iombonana tao amin'ny faritry ny anjerimanontolo.
Nivory teo amin'ny kianja filalaovana basikety sy teny an-davarangan'ny sekoly isaky ny rihana ireo mpianatra avy amin'ny lisea, ary nihorakoraka hoe “tsy misy mpirotaka eo, fa tsirefesimandidy no misy ” ary ny hoe “#Ampio menaka ry Hongkongers!”
lahatsary nalaina tao amin'ny telegram omaly
Tsy nomena ny fahalalahana. Tany amin'ny sekoly ambaratonga ambony sasany, nivory teo ivelan'ny anjerimanontolo ireo maintimolaly mpanohana ny fitondrana mba hampitahorana ireo mpianatra. Ny tena ratsy kokoa aza dia nisy mpitantana ny sekoly maromaro niantso ny mpitandro filaminana mba hampiato ny mpianatra tsy hanao fihetsiketsehana. Nisy zazalahy mpianatra iray naratra mafy ary nampidirina hopitaly rehefa nanenjika azy tao anatin'ny anjerimanontolo ny polisy .
Nandà tsy hamela ireo mpianatra manohitra ny governemanta hiditra tao anatin'ny faritry ny sekoly androany maraina ny tale tao amin'ny lisea iray ao TaiPo. Tonga ny polisy ary naka ny karapanondron'ny mpianatra sasany. Naratra ny ankizilahy iray rehefa nentin'ny polisy.
Raha tokony handinika ny politikan'i Shina ao Hong Kong dia namerina nilaza ny filàna hanamafisana ny fanabeazana hitia tanindrazana ao Hong Kong ny Biraon'ny Misahana an'i Hong Kong sy Macau ao Beijing. Nanabe an'i Joshua Wong sy ireo vondron'ireo mpikatroka mpianatra manodidina azy ny tolo-kevitry ho an'ny fandaharam-pianarana momba ny fanabeazana ara-moraly sy nasionaly ao Hong Kong izay tsy maintsy atao ho an'ny rehetra tamin'ny taona 2012 . Nitondra taranaka mpianatra mpanao fihetsiketsehana mahazaka kokoa ny fihetsiketsehana manohitra ny fampodiana olona amin'izao fotoana izao. Afaka mifehy ny ankehitriny, fa tsy ny hoavy ny politikan'ny famoretana.